Taom-pianarana 2021-2022: tanjon’ny Orange Solidarité Madagascar ny sekoly nomerika 30 | NewsMada
Taom-pianarana 2021-2022: tanjon’ny Orange Solidarité Madagascar ny sekoly nomerika 30
Mitohy ny asa sosialy ataon’ny Orange solidarité Madagascar. Mikendry ny hametraka sekoly nomerika 30 vaovao indray izy ireo ho amin’ity taom-pianarana vaovao ity.
Notanterahina omaly ny sonia fanamafisam-piaraha-miasa teo amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny Orange solidarité Madagascar amin’ny fanohizana ny fandaharanasa sekoly nomerika. Hatramin’ny taona 2014 nisian’ny tetikasa, nahatratra 6.000 ireo “tablettes” nozaraina tamin’ireo sekoly 157 manerana ny faritra 22 teto Madagasikara.
Fantatra omaly fa sekoly vaovao miisa 30 ny hisitraka kojakoja nomerika amin’ity taom-pianarana vaovao 2021-2022 ity. Ahitana ordinatera hoentin-tanana, “tablettes” 25 ary “casques” 25 sy “serveurs Raspberry » miisa roa miaraka amin’ny vidéoprojecteur iray ary écran iray izany kojakoja nomerika izany. Ankoatra izany ny “Powerbank » sy ireo kojakoja madinika miaraka aminy.
Sekoly roa tsy mbola manana jiro no hahazo fitaovana manokana mamatsy herinaratra mifanaraka amin’izany hahafahana mampandeha ireo kojakoja nomerika ireo hahalavorary ny fampianarana. Iarahana amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny fisafidianana ireo sekoly tokony hisitraka ny tolotra nomerika avy amin’ny Orange solidarité Madagascar.